China Ibu Ọrụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ibu Ọrụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 22 Ngwaahịa maka Ibu Ọrụ)
50W Ebube Motion Ebube Na-echekwa Oghere Ngwá Ọrụ
3 ndenye ikike Mgbaba ụgbọala maka ugbo ala enwere ike ime ihe n'ime ime ụlọ ma ọ bụ ọkara n'èzí n'èzí, dị ka ụlọ mposi ime ụlọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nhazi kọmputa, nchekwa ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ nsị, ụlọ ọrụ gas, ụlọ nrịba, ụlọ ndị na-echere, ebe a na-anọ ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Ebe nchekwa ụgbọala...
75W Ebube Motion Egwuregwu Ngwá Ngwá Ọrụ
Anyị 75 na-egbukepụ egbukepụ egbuke ụgbọala ụgbọala Garage mere na elu Lumen mmepụta LED ibe, 5000k ìhè ìhè. Nke a 75W Garage Ịgba Ọkụ Mmiri na -ejikọta 250W HPS / HID / HALITE ìhè ya na ọkwa dị elu nke 120lumens per watt, ruo 9000lm na obere obere lumen; Ogologo ogologo ndụ ruo 50,000hrs. Oghere Ibu Garage elu a...
Anyị 150w Mere nkwakọba Light fixtures ihe karịrị 19500lm na arụmọrụ bụ n'elu 130lm / w. Ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ a Ọ bụrụ na ị naghị ahụ onwe gị, ọ ga-eme ka okpukpu abụọ gbanwee okpukpu abụọ ma zọpụta ụgwọ ọrụ iji dochie bọtịnụ na obere oge. Oge mmalite maka 150w Led High Bay Warehouse Light bụ ihe na-erughị 0,5 s, ọ...
Ibu Ọrụ Ewuwu Ọrụ Ibu Ọrụ Ọrụ Job Ebube Ọrụ Ọrụ 120W Ọkụ Led Bulb Ọkụ Obere ọkụ Mgbidi Mgbidi Ọrụ